SAWIRRO: ”Caawa dab baan gelin doonnaa Real Madrid” – Taageerayaasha Napoli oo dhaarsan – Gool FM
SAWIRRO: ”Caawa dab baan gelin doonnaa Real Madrid” – Taageerayaasha Napoli oo dhaarsan
(Napoli) 07 Maarso 2017 – Afhayeenka taageerayaasha Napoli ee Decibel Bellini ayaa hoosta ka xarriiqay in taageerayaasha Stadio San Paolo uu sida uu yiri ay “ay dab gelin doonaan” kooxda Real Madrid caawa.
Labada kooxood ayaa caawa ku ballansan lugta 2-aad ee wareegga 16-ka Champions League, waxaana la sheegayaa inay taageerayaashu qaylo aan kala go’ lahayn bilaabi doonaan isla marka ay dhamaato astaanta UEFA, iyadoo ay horraanba garoonka haatan joogaan in ka badan 40 kun oo taageere oo Napolitan ah.
“Waxaan aaminsan ahay inaan soo laaban karno, Neapolitan-ka oo dhami waa sidaas. Waa inaan midaysannahay oo aan qalbiga ka ciyaarnaa,” ayuu ninka garoonka ka hadla ee ‘Decibel’ Bellini uu u sheegay Bernabeu Digital.
“San Paolo aad buu muhim u yahay waayo si aan u garaacno horyaallada adduunka waa inaan noqonnaa 12 ka horjeedda 11. Caawa dab baan gelin doonnaa Real Madrid.” ayuu raaciyay.
Kooxda Inter Milan oo 3 laacib qandaraaska u kordhinaysa